Uhuru Kenyatta Oo Ku Guulaystay Inuu Noqdo Madaxweynaha Afraad ee Kenya | Somaliland.Org
Uhuru Kenyatta Oo Ku Guulaystay Inuu Noqdo Madaxweynaha Afraad ee Kenya
March 9, 2013	Nairobi (Somaliland.Org)-Gudoomiyaha gudiga doorashada Dalka Kenya ayaa si rasmi ah galabta ugu dhawaaqay inuu ku guulaystay doorashadii Kenya, Uhuru Kenyatta oo noqonaya madaxweynihii afraad ee dalkaas, isagoo helay 6,173,433 oo cod, halka Raila Odingana uu helay 5,340,546 oo cod.
Kenyatta ayaa sannadii 2002-dii ku guul darraystay inuu xilkaas qabto kadib markii u la tartamay madaxweynaha haatan xilka kasii dagaya ee Mwai Kipaki.Waxaana xilligaas uu hogaaminayay xisbigii kaligiis ka talin jiray Kenya ee KANU.
siday faafisay Hiiraan Online oo aanu warkan ka soo xiganay, Uhuru oo 51 jir ah ayaa waxaa markan uu helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, taasoo uu si rasmi ah u shaaciyay Axmed Isaaq Xassan oo ah gudoomiyaha gudiga Doorashada Kenya.
Waxaa uu Uhuru kamid yahay dadka ugu dhaqaalaha badan dalka Kenya, iyadoo qoyska reer Kenyatta ay yihiin reerka ugu hantida badan dalkan, iyadoo lagu qiyaaso hantidooda in ku dhow 5 billion oo dollar.
Waxaana codadka ugu badan uu ka helay qabiilkiisa Kikuyada, Kalanjiinta iyo Soomaalida iyadoo deegaanada kalana uu inta badan ku guulaystay musharrixii la tartamayay ee Raila Odinga.
Uhuru iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa waxaa horyaalla inay soo celiyaan kalsoonida bulshada caalamku ay ku qabtay Kenya, maadaama labadoodaba ay ku socoto dacwad ay u jeedisay maxkamadada caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
Hadii ay maxkamadaas la shaqayn waayaan ayaa laga cabsi qabaa in Kenya la saaro cunaqabatayn dhaqaale, taasoo hoos u dhigi karta dhaqaalaha dalkan oo ku xiran maalagashiga reer galbeedka.
Gudoomiyaha gudiga doorashada Axmed Isaaq Xassan oo natiijadii mudada dheer la sugayay shaaciyay ayaa uga mahadceliyay Kenyaanka kalsoonidii ay siiyeen gudigiisa, isagoo sheegay inay qabteen doorashadii ugu horreysay ee si cadaalad ah uga dhacda Kenya, tan iyo markii ay xorriyada qaadatay.
Waxaana uu sheegay inay doorashadani wax wayn ka badashay soo celinta sumcadii ay Kenya ku dhex lahayd bulshada caalamka oo baaba’day markii doorashadii hore uu dhiig badani ku daatay.
Previous PostUrur Cusub Oo la yidhaaho GABAX Foundition oo lagaga dhawaaqay HargeysaNext PostMarwadda Koowaad Oo Ka qeyb gashay Xaflad Lagu Xusayay Maalinta Haweenka Aadduunka	Blog